बिहिवार, आषाढ १८, २०७७
Thu, Jul 2, 2020 at 8:13pm
पार्टी एकताको भावना विपरीत नजान नेतृत्वलाई नेकपा पाल्पाको आग्रह #आहा खबर# काठमाडौं उपत्यकामा थप ३२ जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि #आहा खबर# बिहीबार थप ४७३ जनामा देखियो कोरोना सङ्क्रमण #आहा खबर# नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री नै नआएपछि नेताहरू छलफलमा #आहा खबर# कोरोना संक्रमणबाट डेढ महिने शिशुको मृत्यु #आहा खबर# ७ सयलृ घट्याे सुनकाे भाउ, कति पुग्याे ताेलाकाे ? #आहा खबर# सामसङले नेपाली बजारमा घटायाे स्मार्टफोनको मूल्य #आहा खबर# मन्त्रिपरिषद‍् बैठक अघि प्रधानमन्त्री ओली पुगे राष्ट्रपति निवास #आहा खबर# सरकारलाई जिम्मेवार बन्‍न राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको आह्‍वान #आहा खबर# बारामा चट्याङ लागेर धान रोपीरहेका चार महिलाको मृत्यु #आहा खबर# ओली निकटका नेताहरु प्रचण्डसँग छलफल गर्न खुमलटारमा #आहा खबर# आजदेखि बालबालिकालाई रोटा भाइरसविरुद्धको खोप दिइँदै #आहा खबर# जुवा खेलिरहेको अवस्थामा २ महिलासहित ६ जना पक्राउ #आहा खबर# कोठाभित्र एउटै पासोमा झुन्डिएको अवस्थामा प्रेमी–प्रेमिका #आहा खबर# गण्डकी प्रदेशमा थप ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि #आहा खबर#
मंगलवार, आषाढ ३१, २०७६ साल
कराची, ३१ असार । पाकिस्तानले मंगलबार सबै प्रकारका नागरिक उडानहरुका लागि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र पुनः खुला गरेको छ । पाकिस्तान र भारतबीच उत्पन्न तनाबका कारण पाकिस्तानले भारत समेत सबै मुलुकका गैरसैनिक बिमानको पाकिस्तानी आकाश हुँदै उडानहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पाकिस्तानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) ले सबै प्रकारका गैरसैनिक उडानहरुका लागि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र खुला गरिएको जनाएको छ । सीएएका प्रवक्ताले भारतसँग सीमा जोडिएको..
२ अर्ब भारतीय रुपैयाँको वैवाहिक कार्यक्रम, नायिका कट्रिनादेखि योग गुरु रामदेवसम्म सहभागी
सोमबार, आषाढ १६, २०७६ साल
अउली, भारत, १६ असार भारतको उत्तराखण्डको अउली नगरमा एक बैबाहिक कार्यक्रमका क्रममा थुप्रिएको करिब तीन सय क्वीन्टल फोहोर विसर्जन गरिएको छ । नगर निगमका अधिकारीहरुका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाका एक व्यापारीका दुई छोराको बिहेका कारण त्यस्तो फोहोर थुप्रिएको थियो । जोशीमठ नगर निगमका सफाई कर्मचारी अनिल कुमारले बिहेका कारण दुर्गन्धित भएको इलाका पूरै सफा गरिएको जानकारी दिनुभयो । गुप्ता परिवारको विवाह समारोह गत जुन..
बङ्गलादेशको संसदद्वारा नयाँ आर्थिक बर्षका लागि ६२ अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट अनुमोदन
आईतवार, आषाढ १५, २०७६ साल
ढाका, बङ्गलादेश, १५ असार । बङ्गलादेशको संसदले आर्थिक बर्ष २०१९-०२० का लागि अहिलेसम्मकै उच्च पाँच ट्रिलियन टाका ( झण्डै ६२ अर्ब अमेरिकी डलर) को बजेट अनुमोदन गरेको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरलाई ८.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको सरकारले अर्थमन्त्री एएचएम मुस्तफा कमलद्वारा जारी बार्षिक बजेट कार्यक्रमलाई आइतबार संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सत्ताधारी दल बङ्गलादेश अवामी लिग..
मोदीले मन पराए नेपालको चुनावी 'मोडल', केन्द्र र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्न प्रस्ताव !
बुधबार, आषाढ ४, २०७६ साल
नयाँ दिल्ली, ४ असार भारतमा पनि नेपालमा जस्तै संघ र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्नको लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्ताव गरेका छन् । दोहोरो चुनावका कारण राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भारत भएको र शासकीय पद्धतीको तालमेल नमिलेका कारण मोदीले त्यस्तो चुनावको लागि छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक डाकेका हुन् देशमा एक साथ विधानसभा र लोकसभाको चुनाव गराउनको लागि मोदी सरकारले गरेको यो दोस्रो बैठक हो । सन्..
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दिए राहुललाई जन्मदिनको शुभकामना, कति बर्ष पुगे ?
काठमाडौँ, ४ असार । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीलाई बुधबार ४९ वर्ष पुगेको अवसरमा शुभकामना दिएका छन् । गान्धीको जन्मदिनका अवसरमा देशभरका समर्थकहरुले उत्सव मनाउँदै शुभकामना तथा बधाई दिइरहेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि कांग्रेस अध्यक्ष गान्धीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले राहुलको सुस्वासथ्यको कामना पनि गरेका छन् । मोदीले लेखेका छन्, ‘राहुल गान्धीलाई..
इन्सेफ्लाइटिसका कारण सयभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु
काठमाडौँ, ४ असार । भारतको बिहारमा इन्सेफ्लाइटिसको महामारीबाट सयजनाभन्दा बढी बालबालिकाको ज्यान गएपछि सरकारले झन्डै एक सय स्वास्थ्य अधिकारीलाई प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ । पूर्वी राज्य बिहारको मुजफ्फरपुर जिल्लामा इन्सेफ्लाइटिसबाट प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले ती स्वास्थ्य अधिकारी खटाएको हो । राज्य सरकारलाई औषधि–उपचारका साथै रोगजन्य विषयमा आवश्यक सहयोग गर्न उच्चस्तरीय टोली त्यसतर्फ पठाएको केन्द्रले जनाएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय सरकारले..
चेन्नाईमा पानीको चरम अभाव, रेल्वे स्टेशनदेखि रेष्टुराँसम्म बन्द !
मंगलवार, आषाढ ३, २०७६ साल
एजेन्सी, ३ असार पानी भण्डारण गरिएका चारवटा प्रमुख जलाशय क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुकेपछि भारतको दक्षिणी सहर चेन्नाईमा पानीको चरम अभाव उत्पन्न भएको छ। अभाव बढ्दै गएपछि शहरमा तात्कालिक समाधानका लागि नयाँ ठाउँहरूमा जमिन खन्ने काम भइरहेको छ। अभावका कारण रेष्टुराँ बन्द भएका छन् भने सरकारले ट्याङ्करबाट बाँड्ने पानी लिन सर्वसाधारण घण्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। "चेन्नाईलाई यो अवस्थाबाट अब वर्षाले मात्रै बचाउन सक्छ," एक..
भारतमा अत्यधिक गर्मी : बिहारमा १०० जना उच्चस्तरीय स्वास्थ्य अधिकारी पठाइयो
नयाँ दिल्ली, ३ असार । भारत सरकारले इन्सेफ्लाइटिसको महामारीबाट १०० जना भन्दा बढी बालबालिकाको ज्यान गएपछि भारत सरकारले करिब १०० जना स्वास्थ्य अधिकारी बिहारको उक्त प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ । भारतीय पूर्वी राज्य बिहारहको मुजफ्फरपुर जिल्लामा इन्सेफ्लाइटिसको प्रकोप बढेको हो । उक्त जिल्लामा मात्र यस प्रकोपबाट १०० जनाभन्दा बढी बालबालिकाको ज्यान गएको बताइएको छ । त्यहाँको राज्य सरकारलाई औषधि उपचारका साथै रोगजन्य विषयमा..
पश्चिम बंगालमा चुनावी असर बाँकी, ४ कार्यकर्ताको हत्या, १८ जना घाइते
आईतवार, जेष्ठ २६, २०७६ साल
कोलकाता, २६ जेठ । भारतमा दुई राजनीतिक पार्टीका चार कार्यकर्ताको गोली हानी हत्या भएको छ । सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थक तीन जना र अर्को एउटा क्षेत्रीय पार्टी त्रिणमुल कङ्ग्रेस पार्टीका एक जना गरी चार जना मारिएका हुन् । पश्चिम बङ्गालमा भएको सो घटनामा परी अरु १८ जना घाइते पनि भएको प्रहरी अधिकारीहरुले आइतबार जानकारी दिएका छन् । भाजपाका स्थानीय नेता मुकुल..
इमरानको मोदीलाई पत्रः कश्मीरलगायतको मुद्दामा वार्ता गर्न आग्रह
शनिबार, जेष्ठ २५, २०७६ साल
एजेन्सी, २५ जेठ पकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले शुक्रबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई चिठी लेख्दै कश्मीर मुद्दासहित सबै समस्याहरूको समाधानका लागि वार्ता गर्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् । दुई देशबीच तत्काल द्विपक्षीय बैठक नहुने भारतले बताएको एकदिन पहिले पाकिस्तानका तर्फबाट कुराकानीको यस्तो प्रस्ताव आएको छ । पुलवामाको आत्मघाती हमलापछि भारत र पाकिस्तान युद्धको स्थितिमा पुगिसकेका थिए । नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यभार सम्हालेपछि पाकिस्तानले वार्ताका..
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले शनिबारदेखि माल्दिभ्स र श्रीलङ्काको भ्रमण गर्ने
शुक्रबार, जेष्ठ २४, २०७६ साल
नयाँ दिल्ली, २४ जेठ : भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको जिम्मेबारी लिएपछि पहिलो विदेश भ्रमण माल्दिभ्समा गर्नुहुने भएको छ । उहाँले यही जुन ८ तारिखका दिन माल्दिभ्सको र त्यसपछि थप एक दिन श्रीलङ्काको भ्रमण गर्नुहुनेभएको हो । एक दिने माल्दिभ्स भ्रमणका क्रममा उहाँले जुन ८ तारिखकै दिन माल्दिभ्सको संसदमा पनि सम्वोधन गर्नुहुने भएको छ । भारतका विदेश सचिव विजय गोखलेले बिहीबार दिएको जानकारी..
भारतीय लोकसभा निर्वाचन विश्वकै महँगो चुनाव ! एक भोटको मूल्य ६ सय भारु ?
बिहिवार, जेष्ठ २३, २०७६ साल
एजेन्सी, २३ जेठ निर्वाचनमा भएको खर्चलाई समेटेर भारतको निजी थिंक ट्याकं ‘सेन्टर फर मिडिया स्टडिज(सीएमएस)’ले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । रिपोर्टमा भारतमा भर्खरै सकिएको लोकसभा चुनावका सम्पूर्ण खर्च समेटिएका छन् । रिपोर्टले सन् २०१९ को लोकसभा चुनाव संसारमा अहिलेसम्म भएको चुनावमध्ये सबैभन्दा महंगो चुनाव भएको देखाएको छ । सीएमएम रिपोर्ट अनुसार भारतको यस पटकको आम निर्वाचनको कुल खर्च ५.५ खर्बदेखि ६ खर्ब भारुबीच..
मोदीले गरे इमरान खानसँग भेट्न अस्वीकार, भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध अब कता ?
नयाँ दिल्ली, २३ जेठ संघाई कर्पोरेसन अर्गनाइजेशन (एससीओ) सम्मेलन १३-१४ जुनमा किर्गिस्तानको राजधानी बिस्केकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान पनि भाग लिँदैछन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार यो सम्मेलनका क्रममा मोदीले इमरानलाई नभेट्ने प्रस्ट पारेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले मोदी र इमरानबीच हुने भनिएको भेटवार्ताबारेमा विदेश मन्त्रालयलाई कुनै किसिमको जानकारी नभएको बताएका छन्। पाक विदेश सचिव सोहेल महमुदको..
श्रीलंकामा मुस्लिम मन्त्रीलाई राजीनामा दिन किन बाध्य पारियो ?
मंगलवार, जेष्ठ २१, २०७६ साल
श्रीलंका, २१ जेठ श्रीलंकामा गत महिना भएको शृंखलाबद्ध बम हमलाको प्रतिक्रियास्वरुप मुस्लिम मन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको छ । श्रीलंकामा गत अप्रिलमा २ सय ५० जनाको ज्यान जानेगरी भएको हमलापछि त्यहाँका मुस्लिम समुदायमाथि दमन गरिएका घटना सार्वजनिक भइरहँदा मन्त्रीलाई समेत राजीनामा दिन बाध्य पारिएको हो । यसका साथै अन्य दुई प्रान्तीय गर्भनरले समेत राजीनामा दिएका छन् । श्रीलंकामा अथुरालियो रतना नामका बौद्धभिक्षुले मुस्लिम..
फोहोर व्यवस्थापनमा भारतलाई टाउको दुःखाई, ताज महलभन्दा अग्लो फोहोरको पहाड !
एजेन्सी, २१ वैशाख फोहोर व्यवस्थापन हरेक शहरी क्षेत्रको सबैभन्दा टाउको दुःखाईको विषय हो । शहरी क्षेत्रबाट दिनँहु निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा शहरका बाटा घाटा र गल्लीभरी फोहोरको थुप्रो थुप्रिएका हामीले देखिरहेका छौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विश्वकै सबैभन्दा फोहोर राजधानी मध्ये एकमा पर्दछ । त्यहाँ अहिले देशकै सबैभन्दा अग्लो फोहोरको पहाड छ । सन् २०२० सम्ममा सो पहाड बढेर ताज महलभन्दा..
चीनको सीमा नजिकैबाट हराएको भारतीय वायुसेनाको विमान कहाँ पुग्यो ?
काठमाडौँ, २१ जेठ । चीनको सीमा नजिकैबाट हराएको भारतीय वायुसेनाको विमानको खोजी भइरहेको छ । वायुसेनाको एएन–३२ विमान चीनको सीमा नजिकैबाट सोमबार हराएको थियो । विमानको खोजी कार्य भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्ययमले जनाएका छन् । विमान खोजी अभियानमा विशेष अपरेशनमा प्रयोग हुने एयरक्राफ्ट सी–१३०, एएन–३२ एस, एमआई–१७ चोपर र थलसेनाका विभिन्न आधुनिक हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको छ । चालकदलका आठ सदस्यसहित १३ जना यात्री चढेको..
१३ यात्रु रहेको भारतीय सैन्य विमान सम्पर्कविहीन
सोमबार, जेष्ठ २०, २०७६ साल
गुवाहाटी २० जेठ भारतीय उत्तरपूर्वी राज्य आसामको जोरहातबाट चालकदलका सदस्यसहित १३ यात्रु लिएर सोमबार विहान उडेको भारतीय सैनिक विमान सम्पर्कविहीन भएको यहाँको रक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। रूसमा बनेको एन्टोनोभ एएन–३२ विमान जोरहातबाट दिउसो १२:२५ मा अरूणाञ्चल प्रदेशको मेचुकातर्फ उडेको मन्त्रालयले जनाएको छ। “विमानले पछिल्लो पटक दिउँसो १ बजे विमानस्थलसँग सम्पर्क गरेको तर त्यसपछि सम्पर्कविहीन रहेको छ,” मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विमानमा चालकदलका आठ..
सुव्रमण्यम जयशंकरको कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो रहला ?
काठमाडौं, २० वैशाख भारतमा डा. सुव्रमण्यम जयशंकर विदेशमन्त्री बनेर धेरैलाई चकित पारेका थिए । सरकारी सेवामा रहेर राजदूत हुँदै विदेश सचिव बनेर सेवानिवृत्त बनेका जयशंकरलाई मोदीले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिंदा नेपालमा भने त्रासको विषय उठ्यो । २०७२ सालमा नेपालमा संविधान जारी गर्दा जयशंकर भारतको विदेशसचिव थिए । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूत भएर नेपालसँग संविधान जारीमा केही ढिलाई गर्न भन्न आएका थिए..
भारतीय कंग्रेसले प्रतिपक्षीको स्थान नपाउनुको कारण यस्तो छ ...
शनिबार, जेष्ठ १८, २०७६ साल
काठमाडौँ, १८ जेठ भारतीय कांग्रेसले यस पटकको चुनावमा नसोचेको पराजत भोग्यो । लोकसभामा उसको जम्मा ५२ सांसद मात्र छन् । ५२ लोकसभा सांसद भएपनि यो पटक पनि काँग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षको स्थान पाउनेछैन । भारतीय संविधानअनुसार प्रतिपक्षको भूमिका पाउनका लागि पार्टीसँग कुल संसदीय सिटको १० प्रतिशत सांसद आवश्यक हुन्छ । लोकसभामा कुल ५४३ सिट रहेको छ र प्रतिपक्षको भूमिका पाउनका लागि उसको ३ सिट कम भएको छ ।..
सोनिया गान्धी बनिन् कँग्रेस संसदीय दलकी नेतृ, राहुल भन्छन् : भाजपाका लागि हामी ५२ नै काफी
एजेन्सी, १८ जेठ भारतीय नेसनल काँग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेत्रीको रुपमा सोनिया गान्धीलाई चुनेको छ। शनिबार बसेको बैठकले सोनियालाई संसदीय नेत्रीको रुपमा चयन गरेको हो। त्यस क्रममा काँग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया जनाए। उनले आफूहरु ५२ सांसद भारतीय जनता पार्टीको लागि काफी भएको बताए। हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा काँग्रेस ५२ सिटमा सीमित भएको थियो। भाजपाले भने..
मोदी मन्त्रिमण्डल कार्यभार : एस जयशंकर बने नयाँ विदेश मन्त्री, गृहको जिम्मा अमित शाहलाई
शुक्रबार, जेष्ठ १७, २०७६ साल
काठमाडौँ, १७ जेठ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नानिकट सहयोगी अमित शाहलाई गृहमन्त्री बनाएका छन् । त्यसैगरी पूर्वविदेश सचिव एस जयशंकरलाई मोदीले परराष्ट्र मन्त्री बनाएका छन् । पूर्व गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिइएको छ । राजनीतिक वृतलाई अचम्ममा पार्दै मन्त्रीका रुपमा सामेल गरिएका एक मात्र गैर सांसद तथा पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर मोदी सरकारका विदेश मन्त्री बनेका छन् । नेपालमा संविधान..
यस्तो छ नरेन्द्र मोदीको ५८ सदस्यीय क्याबिनेट, अध्यक्ष अमित शाहको भागमा कुन मन्त्रालय ?
नयाँ दिल्ली, १७ जेठ । गणतन्त्र भारतको १५ औं प्रधानमन्त्रीकारुपमा नरेन्द्र मोदीले शपथ लिएसँगै उनी अधिकांश पुरानै चेहरा बाहुल्य रहेको मन्त्रिमण्डल लिएर फेरि प्रकट भएका छन् । मोदीको ५८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा कुल ३७ पुरानै अनुहार छन् । यहाँस्थित राष्ट्रपति भवनको प्रांगणमा उपस्थित हजारौं मानिस तथा अनेकौं खास अतिथिहरुको उपस्थितमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएका थिए । हालै सम्पन्न..
८ हजार भन्दा बढी पाहुनाका अगाडि मोदीले लिए दोस्रोपटक भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथ
काठमाडौँ, १६ जेठ भारतीय प्रधानमन्त्रीका रुपमा नरेन्द्र मोदीले दोस्रोपटक शपथ लिएका छन्। नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति निवासमा मोदीले बिहीबार साँझ शपथ लिएका हुन्। शपथमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी भएका छन्। ओलीसहित बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरु मोदीको शपथ समारोहमा सहभागी भएका थिए। शपथमा विपक्षी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी र नेत्री सोनिया गान्धी पनि सहभागी भएका थिए। एनडीए गठबन्धनको प्रमुख दल जनता दल भने..
मोदीको सपथ कार्यक्रममा सहभागी हुन नेताहरु दिल्लीमा, विमानस्थलमा भब्य स्वागत
बिहिवार, जेष्ठ १६, २०७६ साल
नयाँदिल्ली, १६ जेठ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालका लागि बिहीबार साँझ हुने सपथ कार्यक्रममा सहभागी हुन भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङ बिहीबार नयाँदिल्ली पुग्नुभएको छ । उहाँलाई भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेले विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भवनमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले स्थानीय समय अनुसार साँझ ७ बजे नरेन्द्र मोदीलाई भारतको प्रधानमन्त्री पदको सपथ गराउनु हुनेछ । बहुपक्षीय..
​पाकिस्तानमा मुस्लिम धर्मविरोधी गतिविधि गरेको भन्दै हिन्दू डक्टर पक्राउ
बुधबार, जेष्ठ १५, २०७६ साल
काठमाडौँ, १५ जेठ ​ सोमबार पाकिस्तानमा एक हिन्दू डक्टर पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनले मुस्लिम धर्मका ईश्वरको निन्दा गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। उनलाई पाकिस्तानको दक्षिण सिन्ध प्रान्तबाट पक्राउ गरिएको हो। रमेश कुमार नाम गरेका डक्टरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। डक्टरसँग आक्रोशित बनेका प्रदर्शनकारीले मिर्पुखासस्थित फुलाडियोनमा रहेको हिन्दूका पसलमा आगो लगाइदिएका छन्। स्थानीय मस्जिदका प्रमुख मौलभी इशाक नोह्रीले प्रहरीमा डक्टरले मुस्लिमको पवित्र ग्रन्थ..
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नजरमा नेपाल : पहिलो निम्तो नेपाललाई, स्वीकार गर्ने पनि नेपाल पहिलो
काठमाडौं, १५ जेठ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रमका लागि विदेशी कार्यकारी प्रमुखलाई गरिएका निम्तोमध्ये सबैभन्दा अगाडि भ्रमण ‘कन्फर्म’ गर्नेमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको भारतीय पत्रिका बिजनेश स्ट्यान्डर्डको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ । सो अनलाइनले एकजना मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार नै त्यसतर्फ जाने जनाएको छ । उनी बिहीबार साँझ ७ बजे भारतको राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजना..
भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा तनाव यथावत् ! मोदीले इमरानलाई सपथमा बोलाएनन्
मंगलवार, जेष्ठ १४, २०७६ साल
नयाँ दिल्ली, १४ जेठ नरेन्द्र मोदीले बिहीबार दोस्रो कार्यकालका लागि पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदैछन्। आफ्नो सपथ समारोहका लागि मोदीले सबै छिमेकी देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखलाई निम्ता पठाएका छन्। मोदीको निम्तो मान्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बिहीबार नयाँदिल्ली जाँदैछन् । मोदीको सपथ ग्रहणमा छिमेकी पाकिस्तानबाट भने पाहुना निम्त्याइएको छैन। यसअघि गत बिहीबार लोकसभा चुनावमा मोदीको भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्याएपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान..
मोदीको सपथ ग्रहणमा विमिस्टेक सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखलाई बोलाउने तयारी !
काठमाडौं, १४ जेठ नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको सपथ ग्रहणमा विमिस्टेक राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरुलाई निम्ता गरिएको छ । पहिलो कार्यकालमा सबै सार्क मुलुकका सरकार प्रमुखहरुलाई बोलाएर सपथ ग्रहण गरेका मोदीले यस पटक भने विमिस्टेक मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरुलाई बोलाउन लागेका हुन् । उनले विमिस्टेक सहित सार्क मुलुक र रसियाका सरकार/राष्ट्रप्रमुखलाई बोलाउने इच्छा जनाएको भएपनि सो विषयमा निर्णय भने भइनसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । कूटनीतिक रुपमा नयाँ..
यस्तो पनि ! मोदीलाई कुदृष्टि नलागोस् भनी बनारसको कालभैरव मन्दिरमा पूजा !
सोमबार, जेष्ठ १३, २०७६ साल
काठमाडौं, १३ जेठ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका समर्थकहरू उनीमाथि खराब नजर नपरोस् भन्ने कामना राख्छन् । त्यसैले गर्दा उनीहरूले काशीको बाबा कालभैरवको मन्दिरमा पूजाआजा गरेका छन् । उनीहरूले कालभैरव मन्दिरमा प्रधानमन्त्री मोदीको कटआउट राखेर विशेष पूजा गरे अनि झारफुक गरेर खराब नजर पनि उतारे । कालभैरवका पुजारीहरूले आइतवार मोदीको कटआउटलाई दण्डले झारफुक गरे अनि कालभैरवको रक्षाकवचका रूपमा ताबिज पनि बाँधे । उनीहरूले बटुक भैरव..
राजीनामा दिने राहुल गान्धीको प्रस्ताव कांग्रेस कार्यसमितिद्वारा अस्वीकृत
शनिबार, जेष्ठ ११, २०७६ साल
काठमाडौँ, ११ जेठ । लोकसभा चुनावमा कांग्रेसले नराम्रो हार व्यहोरेको छ । उसले थुप्रै राज्यमा खाता समेत खोल्न सकेन र जम्मा ५२ सिट जितेको छ । चुनावमा निराशाजनक प्रदर्शनपछि राहुलको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । लोकसभा चुनावमा व्यहोरेको हारपछि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले राजीनामा दिने प्रस्ताव राखेका छन् । तर कांग्रेस कार्यसमितिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । चुनावपछि बसेको कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकमा..
Results 348: You are at page4of 12
काठमाडौं उपत्यकामा थप १४ जनामा देखियो कोरोना सङ्क्रमण
१८५ नगरपालिकामा एकीकृत शहरी विकास योजनाः मन्त्री नेम्वाङ
न्यूजिल्याण्डमा शक्तिशाली भूकम्प, अब सुनामी आउन सक्ने भन्दै ‘हाई अलर्ट’ जारी
मनसुनको शक्तिशाली नयाँ प्रणाली, यस्ताे छ तिन दिनकाे माैसम पुर्वानुमान
पार्टी एकताको भावना विपरीत नजान नेतृत्वलाई नेकपा पाल्पाको आग्रह
काठमाडौं उपत्यकामा थप ३२ जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
बिहीबार थप ४७३ जनामा देखियो कोरोना सङ्क्रमण
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री नै नआएपछि नेताहरू छलफलमा
कोरोना संक्रमणबाट डेढ महिने शिशुको मृत्यु